ग्रह राशिअनुसार तपाईंको समय कस्तो चलिरहेको छ , हेर्नुहोस् तपाईंको आजको राशिफल
November 23, 2020 899
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) प्रति-श्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । पारीवारिक मनो_रञ्जनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहे-कोछ । नयाँ कार्य थाल-निको योग रहेकोछ । मध्यान्न पश्चात सामाजिक कार्यमा सह-भागीता जनाउने समय रहेकोछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सु-धार रहनेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पाद-नमा मदत पूग्नेछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) खराब संगतका कारण सा-मान्य अप्जस सहनु पर्ला । मनोरञ्जन मुलक सर-सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । तात्का-लिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । सामान्य कार्यमा धेरै समय र श्रम खर्चनु पर्ला । सामान्य चो-टपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ सजग रहनु होला ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) नयाँ कार्यको थाल’निले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पा:दनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्प:र्दामा अबल रहीनेछ । तपाईको मिहिनेत’बाट अरुहरुले फाईदा लिन सक्नेछन । कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाईको सामना हुन सक्छ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । सा’मान्य कार्यमा धेरै समय र श्रम खर्चनु पर्ला । पारी’वारको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा सह’भागीता जनाउने समय रहेकोछ । नयाँ कार्यको थाल’निले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) मनोबि:लासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । तपाईको मिहिनेतबाट अरुहरुले फाईदा लिन सक्नेछन । कार्य क्षेत्र’मा सामान्य ढिलाईको सामना हुन सक्छ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ । आफन्त जन बिच भेट’घाट हुन सक्ने सम्भा’बना रहेकोछ । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ । वाणी’का कारण सामान्य वादवि’वाद आईपर्न सक्नेछ । नजिकका साथी भाईहरु सगँ सामान्य मनमु’टाब हुन सक्नेछ । शारिरीक अस्वस्थाको सामना गर्नु पर्ला । गैर ब्यक्ती’को पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) मान्यजनको साथसहयोगको कमी मह’सुस गरीनेछ । शारिरीस्क आलस्य:ताले सताउन सक्नेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगका निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रेम सम्ब’न्धमा सुधार आउनेछ साथै जिबन साथीको सहयोमा कार्य सम्पादनमा मद्धत मिल्नेछ । ब्यापार ब्यवसा’यका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि रहनु होला ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) यात्राका निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रतिस्पर्दी’हरु कमजोर हुनाले आर्य’आर्जनमा बिषेश फाईदा रह’ला । स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पा’दनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दामा अबल रहीनेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) प्रिय ब्यक्तिको भेटघाटमा मन प्रशन्न रहनेछ तथा पारिवा:रीक मनोरञ्जका निम्ती सामान्य खर्च हुनेछ । सा’मान्य सघंष पश्चात मनग्य आम्दानिका श्रोत’हरु फेला पर्नेछ । बिद्यार्थी बर्गका लागी दिन उत्तम रहनेछ । नयाँ का’र्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पुरानो लगा’नि उठाउने राम्रो समय रहेको छ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुख’मा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । भौतिक साधनको प्रयो’गमा समय ब्यतित हुन सक्छ । ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिला’ईको सामना हुन सक्छ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) नयाँ कार्य थाल’निका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । शुभचिन्त’कहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य स’हज बन्नेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर हुनाले आर्यआर्जनमा बिषेश फाईदा रहला । पराना मित्रज’नहरु सगँको भेटघा’टले सामान्य यात्रा निम्त्या’उन सक्नेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) बाणीको चातुर्य’ताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ । सामान्य चोटप’टकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब र’हन सक्छ ।सन्तान सम्बन्धि स’मस्याले सताउने छ । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ ।
Prevडर’लाग्दो यो भिडियोः कामको ओभर-लोडले मलेसियामा नेपालीहरु कम्पनीमै ढल्दै र छटपटाउँदै (भिडियो)
Nextगणेश भगवानको दर्शन गर्दै आज मंसिर ९ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्
मेरी छोरीको ज्यान लिनेलाई जेलमा सडाएमात्रै छोरीले न्याय पाउँछे भन्दै रोइरहन्छन् सम्झनाका बुवा
घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ? हेर्नुहोस्
आज डलरको भाउ घट्यो, अन्य विदेशी मुद्राको भाउ यस्तो छ.. पूरा हेर्नुहोस्
अर्जुन घिमिरे (पाँडे) को आज जन्मदिन, कति वर्षमा लागे उनी ? हेर्नुहोस्
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ: पढ्नुहोस् (61704)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (59933)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (51771)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (50359)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46269)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (45795)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (37936)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (33474)
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य , यस्तो छ आजको सुनको भाउ (31506)
विवाहपछि श्वेता र विजयन्द्रको पहिलो टिकटक ,भिडियो भयो भाईरल, लाखौंले हेरे (भिडियो हेर्नुस्) (31228)
एक दिनमै ८ छाक खाने सर-कारी कर्मचारी..
‘भोलीदेखि न्युज २४ टिभिबाट बिदा हुँदैछौं’ भन्दै रवि लामिछानेले लेखे यस्तो स्टाटस
दिपक-दिपाको ‘छ माया छपक्कै’ फिल्म युट्यूवमा आयो (भिडियो सहित)
आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नु-होस यस्तो छ बिनिमय दर (तालिका सहित)